राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी हाफ पाइन्टमा - अन्वेषी मिडिया प्रा .लि.
राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी हाफ पाइन्टमा
जगत नेपाल ७ महिना पहिले
राजा हरेक कोणबाट बीपीभन्दा आफूलाई अगाडि देखाउन चाहन्थे । अमेरिका, युरोपको भ्रमणबाट फर्किएपछि २०१७ कात्तिकको अन्तिम साता काठमाडौंको राष्ट्रिय रङ्गशालामा ‘राजा–११ विरूद्व प्रधानमन्त्री–११ फुटबल प्रतियोगिता’ आयोजना भयो । राजाले कति बेला कु गर्छन् होला भन्ने हल्लाले राजधानीको माहोल तातेको थियो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहायता कोषका लागि सहयोग जुटाउन आयोजना गरिएको त्यो फुटबल प्रतियोगिता निक्कै चर्चाको विषय बन्न पुग्यो ।
यो तस्वीरमा राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी हाफ पाइन्टमा देखिन्छन् । यो तस्वीर हो, २०१७ साल कात्तिकमा राजा र प्रधानमन्त्रीको टिम विच भएको फुटवल प्रतियोगितामा खिचिएको तस्वीर । सांसद राजन केसीको सौजन्यमा लेखकलाई प्राप्त भएको हो यो तस्वीर ।
बीपीले एक वर्षपछि सत्ता छोड्छन् भन्ने विश्वासका साथ राजा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएका थिए । तर अनेकौं हथकण्डा अपनाउ“दा समेत बीपीले राजीनामा गरेनन् । राजाले २०१७ को प्रारम्भबाटै निर्वाचित सरकार हटाउने योजना अझ तीव्र बनाए । सरकारलाई बदनाम गर्न सुनियोजित रुपमा चौतर्फी आक्रमण भयो । राजा हरेक कोणबाट बीपीभन्दा आफूलाई अगाडि देखाउन चाहन्थे । अमेरिका, युरोपको भ्रमणबाट फर्किएपछि २०१७ कात्तिकको अन्तिम साता काठमाडौंको राष्ट्रिय रङ्गशालामा ‘राजा–११ विरूद्व प्रधानमन्त्री–११ फुटबल प्रतियोगिता’ आयोजना भयो । राजाले कति बेला कु गर्छन् होला भन्ने हल्लाले राजधानीको माहोल तातेको थियो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहायता कोषका लागि सहयोग जुटाउन आयोजना गरिएको त्यो फुटबल प्रतियोगिता निक्कै चर्चाको विषय बन्न पुग्यो ।
राजाको टिमलाई प्रधानमन्त्रीको टिमले एकका विरूद्ध दुई गोलले पराजित ग¥यो । राजा महेन्द्र क्याप्टेन रहेको टिममा अधिराजकुमारहरु हिमालय र बसुन्धरा, साहेबज्यू हरिविक्रम शाह, उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर राणा, जनरलहरु शेरबहादुर मल्ल र नीरशमशेर, मेजर जनरल सुरेन्द्रशमशेर र रङ्गविक्रम, लेिटनेन्ट जनरल नीरशमशेर, लेिटनेन्ट लोकविक्रम थिए भने टिम म्यानेजर सुशीलशमशेर र १२ औं नम्बरका रिजर्भ खेलाडी केबी सिंह थिए । “प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको टिममा मेजर जनरल सुरेन्द्रबहादुर शाह, डीआईजी रोमबहादुर, प्रकाशचन्द्र ठाकुर, त्रिवेणीप्रसाद प्रधान, धीरविक्रम, दिवानसिंह राई, होराप्रसाद जोशी, तुलसी गिरी, भरतशमशेर राणा, मीनबहादुर गुरूङ थिए । टिम म्यानेजरमा डा. जे.एन. गिरी र १२ औं नम्बरका रिजर्भ खेलाडीमा डी. राज, भीमबहादुर कार्की र एच.पी. गिरी थिए । खेलमा रेफ्रीको भूमिका पद्मबहादुरले निर्वाह गरेको थिए ।” (देवकोटा, २०३६ ः ५४८) ।
त्यो दिन राजा महेन्द्र १९ वर्षपछि फुटबल मैदानमा उत्रिएका थिए । राजाले विजयी खेलाडीहरुलाई पित्तलको कलात्मक आमखोरा र पित्तलकै कचौरा पुरस्कार प्रदान गरे । त्यही दिन राजाका तर्फबाट खेलाडीहरुलाई रात्रिभोज दिइएको थियो ।
(देवकोटा, २०३६ ः ५४८)
सैन्य पोसाकमै संसद्मा राजा
“राजनीतिशास्त्रमा राजा सामन्तवादका प्रतीक हुन् भनिएको छ । तर हाम्रो नेपालमा यो कुरो असाबित हुन आएको छ र राजा प्रजातन्त्रका प्रतीक पनि हुन आउन सक्छन् भन्ने कुरा साबित हुन आएको छ । संसारमा लोककल्याणकारी राज्य घोषणा गर्ने श्री ५ महेन्द्र मात्र हुनुहुन्छ ।”
संसदीय व्यवस्था प्रारम्भ हु“दाका दिनमा राजा र संसद्लाई एकअर्काको परिपूरकका रुपमा व्याख्या गरिएको थियो । तर राजा भने निरन्तर संसद्लाई कमजोर बनाउने र निरङ्कुश शासन स्थापित गर्ने रणनीतिमा थिए । २०१६ साउन ९ गते निर्वाचित संसद्को संयुक्त सदनलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै राजाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे । त्यो दिन राजा महेन्द्र राजदरबारबाट रत्नपार्कस्थित बिजुली अड्डासम्म मोटरमा र त्यहा“बाट ९ घोडे झुप्पावाल बग्गीमा चढेर शाही पोसाकमा ग्यालरी बैठकमा पुगेका थिए । (देवकोटा,
२०३६ ः २११)
पहिलो पटक राजकीय पोसाकमा संसद् भवन आएका राजा दोस्रो पटक चैत १८ गतेचाहि“ सैन्य पोसाकमा थिए । आज कु गर्छन्, भोलि गर्छन् भन्ने हल्लाबीच राजा सैन्य पोसाकमा संसद्मा देखिँदा पनि अधिकांश सांसदलाई पोसाकको अर्थ थाहै भएन । तर अलि बुझ्नेहरुले भने एकअर्काको मुख हेराहेर गरे । तैपनि राजा सैनिक पोसाकमा किन आए ? कसैले प्रश्न उठाएन ।
सांसद कमलराज रेग्मीले २०७१ असार ७ गते लेखकसँग त्यो दिनको स्मरण यसरी गरे, “नेपालगन्जमा निर्वाचित सरकारलाई हा“क दिएको दुई महिनापछि राजालाई एक्कासि संसद् भवनमा सैन्य पोसाकमा देख्ता हामी छक्क प¥यौं । लौ आजै सिद्ध्याउ“छन्् कि भन्ने पनि लाग्यो ।” राजाको त्यस्तो व्यवहारले उनी संसदीय व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट थिएनन् भन्ने देखाउ“छ । प्रतिपक्षी दलका नेता भरतशमशेरले भनेका छन्, “उनी सैनिक पोसाकमा संसद् आएर जनप्रतिनिधिलाई चुनौती दिन चाहन्थे ।” (गौतम, २०६४ ः १५६)
अर्कोतर्फ सेनालाई खुसी पार्न निर्वाचित सरकारलाई थाहै नदिई २०१७ असोजमा राजाले सेना र प्रहरीको तलब बढाइदिए । प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक १५ सय थियो । राजाले सेनापतिको तलब–भत्ता मासिक १७ सय बनाए । (देवकोटा, २०३६ ः ३६७)
मन्त्रीभन्दा जर्नेलहरुको तलब बढी बनाएपछि सरकार र राजाबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । राजा होसियारीपूर्वक आफूले उठाउने सम्भावित कदमबारे परामर्शमा सक्रिय थिए । अरुको कुरा सुन्ने, सुझाब लिने तर आफू निक्कै कम बोल्ने र एक्सनबाट प्रतिक्रिया जनाउने बानी थियो उनको । सेनालाई आनो विश्वासमा लिएपछि कु को केही दिनअगि मात्र राजाले पूर्व प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई भेटी आफूले संसद् विघटन गर्न लागेको बताएका थिए । आचार्यले सरकार विघटन गरे आनो विरोध नरहने भन्दै संसद् भङ्ग नगर्न सुझाब दिए— “सरकार ! संसद्को विघटनले प्रजातन्त्र अन्त्यको सङ्केत गर्छ । त्यसैले त्यो गर्नु उचित ह“ुदैन ।” (गौतम, २०७१ ः २०)
रहस्यको कुरा त काठमाडौंमा निर्वाचित सरकारलाई राजाले आज फाल्छन् भोलि फाल्छन् भन्ने हल्ला चलिरहेका बेला प्रधानसेनापति नीरशमशेरको निमन्त्रणामा भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति के.एस. थिमैया २०१७ मङ्सिर २३ गते दशदिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौं आए । (देवकोटा, २०३६ ः ५५३)
थिमैयाले राजा र प्रधानमन्त्री बीपीसँग भेटे । भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमण त्यति बेला निक्कै चर्चामा थियो । महङ्खवपूर्ण भेटवार्ता सकेर सिकार गर्न भन्दै उनी चितवनतर्फ लागे । त्यसको भोलिपल्ट राजाले शासन सत्ता हातमा लिइहाले ।
राजा त्रिभुवनले बीपीसँग युवराज महेन्द्रका बारेमा धेरै कुरा भनेका मात्र थिएनन्, पटक पटक सचेत पनि गराएका थिए । तर बीपीले कहिल्यै विश्वास गरेनन् ।
“जब सरकारले बिर्ता र राजारजौटा उन्मूलन, भूमि सम्बन्धी नया“ करको व्यवस्था, जङ्गलको राष्ट्रियकरण गर्ने जस्ता विधेयक संसद्बाट पारित गराउन थाल्यो । परम्परागत रुपमै ती सुविधाहरु एकलौटी उपभोग गर्दै आएको सुविधाभोगी वर्ग सरकारको प्रखर विरोधी भएर निस्कियो । यस क्रममा स्थापित नेपाल जनहित सङ्घले संसदीय व्यवस्थाकै विघटनको माग गर्न थाल्यो ।” (रिमाल, २०६२ ः ३८८)
त्यो बेलाको समाजमा सरकारले जनताको पक्षमा एकपछि अर्को क्रान्तिकारी निर्णय लिन थालेपछि राजा सशङ्कित भए । जनताको शक्ति बलियो हु“दा राजा कमजोर हुने कुरा महेन्द्रलाई राम्रैसँग थाहा थियो । उनले देशका विभिन्न भागको भ्रमण गरे । राजाका साथ केही जिल्लाको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री आपैm पनि गएका थिए । सवारी मन्त्री मात्र भए पुग्नेमा प्रधानमन्त्री आपैm पोखरा, बागलुङ हुँदै दाङसम्म जानु पनि राजासँग सम्बन्ध सुधार्ने बीपीको प्रयत्न थियो । दाङबाट बीपी फर्कंदा सवारी मन्त्रीको रुपमा सँगै लगेका आना विश्वासपात्र मन्त्री तुलसी गिरीले राजासँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न सघाउँछन् भन्ने विश्वास बीपीलाई थियो ।
आपैmले सवारी मन्त्री नियुक्त गरी राजासँग छोडेर आएका मन्त्री गिरी त्यतिन्जेलमा पूर्णतः राजाको पक्षमा गइसकेका मात्र होइन, राजनीतिक कु गर्न उकास्तै थिए । राजाको महङ्खवाकांक्षा बढाउने प्रमुख कारणमध्ये त्यो पनि एउटा थियो ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता सुवर्णशमशेर राणा, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले ‘बनाउनु ह“ुदैन’ भनेर विरोध गर्दागर्दै ‘राजालाई आनो पक्षमा पार्न सक्छन्’ भनेर बीपीले डा. गिरीलाई सवारी मन्त्री छानेका थिए । तर गिरीले नै बीपीका सबै कमजोरी राजालाई अवगत मात्र गराएनन्, सरकार विरूद्ध उकास्ने काम समेत गरे ।
राजाले २०१६ माघ १५ गते नेपालगन्जमा सरकारलाई हा“क दि“दै भाषण गरे । डा. गिरीले लेखिदिएको त्यो भाषणमा राजाले भनेका थिए, “हाम्रो देशमा परिस्थिति र संस्कृति सुहाउ“दो नया“ कदम उठाई देश निर्माण गर्नुपरेको छ । यस्तै देशहित कार्यका लागि सबैको सहयोगबाट नै प्रजातन्त्रको जग बस्यो र महानिर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । नत्र यसको माने त्यो होइन कि प्रजातन्त्रको नाम मात्रले देश र जनताको कल्याणको बदला अकल्याण होस्, उद्योगधन्दा घटुन्, न्याय सुलभ र सजिलो नहोस्, भ्रष्टाचार घूसखोरी बढोस्, बेकारी बढोस्, सरकारमा भएका र रहेका व्यक्तिले आनो स्वार्थ मात्र हेरून् र अराष्ट्रिय तङ्खवहरुले फाइदा उठाउन् इत्यादि । तसर्थ अब यी कुराहरुको जिम्मेवारी पनि प्रत्येक नेपालीकै हातमा स्वतन्त्रताका साथसाथै आएको छ । यो सबैले बुझी सहयोगको भावनाले प्रत्येक नेपालीले पाइला चालून् । ताकि मैले आनो कर्तव्य पालनाका लागि अरु कुनै कदम चाल्नु नपरोस् । र, साथै म यो पनि भन्न चाहन्छु कि मेरा पनि केही कर्तव्यहरु छन् । ती हुन्— देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र अन्य देश तथा जनहित कार्यहरुको संरक्षण गर्नु । यदि यसमा कुनै किसिमको बाधा आइपर्छ भने त्यस बेला जहिलेसुकै जेसुकै र जे गर्न परे पनि म कदापि पछि हट्ने छैन ।”
कमेन्ट गर्नेहोस् तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ |
भो नदेखाउ, कमल राणालाई संसदको काम कारवाही
बीपीले छ घण्टा कुराएपछि कम्युनिष्ट
गणेशमान सिंह र वीर अस्पतालको कोठा नं १४
प्रधानमन्त्री आफै हारेको एउटा चुनाव
प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जसले कसैवाट पैसा लिएनन्, जीवनभर पार्टी र कार्यकर्ता पाले
आर्ट अफ गिभिङका र्सजकः अच्युत सामन्त (भिडियो सहित)
जिउँदा महानिरीक्षकको 'अविच्युअरी'
द्वारिकादेवी ठकुरानी, दक्षिण एसियाकै पहिलो महिला मन्त्री
“कु” गर्नु अघि राजा महेन्द्रले भनेका थिए “गभर्नमेन्ट अफ दि पिपुल, फर द पिपुल, बाई द पिपुल, स्याल नट डाई”
दुई दशकसम्म अनुत्तरित एक प्रश्न : प्राण गैसकेका र हत्या आरोप लागेका दीपेन्द्रलाई किन बनाइयो राजा ?
मान बहादुर थापा
ठेगाना : माइतीघर , काठमाडौँ
फोन : +977-9851091099
ईमेल : anweshantv@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं :२८५२\_०७८-७९
2021 अन्वेषी मिडिया प्रा .लि. सर्वाधिकार सुरक्षित.